Atheros QualComm वायरलेस उपकरण चालक Windows अद्यावधिक 10 ओएस-स्टोरबाट | | ओएस-स्टोरमा ब्लग
अप्रिल 25, 2017 व्यवस्थापक 3जी & वायरलेस कार्ड, समाचार, ओएस-स्टोरमा, उत्पादन, प्रविधि 0
We have been updated driver to windows 10 Atheros QualComm वायरलेस उपकरणको लागि.
समर्थन यन्त्र >>>
मोडेल बित्तिकै प्रकाशित गरिनेछ.
अन्त-ग्राहकहरु लागि सिफारिस गरिएको. चालक मात्र र Atheros चालक-संग QualComm वायरलेस वाइफाइ सफ्टवेयर लागि डाउनलोड विकल्पहरू समावेश.
Atheros QualComm वायरलेस वाइफाइ सफ्टवेयर अन्त-ग्राहकहरु लागि सिफारिस गरिएको छ, घर प्रयोगकर्ता र व्यापार ग्राहकहरु सहित उन्नत आईटी प्रशासक उपकरण आवश्यक नगर्ने.
डाउनलोड गर्न के पक्का छैन?
यो सफ्टवेयर अन्त-प्रयोगकर्ताका लागि सिफारिस गरिएको छ. तपाईं Windows® छ भनेर पुष्टि 10 स्थापना अघि अपरेटिङ सिस्टम. जाँच गर्न यी चरणहरू पालना आफ्नो सञ्चालन प्रणाली 64-बिट छ भने.
Atheros QualComm वायरलेस वाइफाइ सफ्टवेयर मा विभिन्न डाउनलोड फाइल प्रकार र जानकारी बीच मतभेद मा विवरण लागि यी लिंक पालना.
केही उत्पादनहरु को चालक संस्करण अद्यावधिक हुन सक्छ. Atheros QualComm वायरलेस एडप्टर चालक संस्करणका बारेमा थप जान्न.
कसरी स्थापना गर्न >>>
कृपया आफ्नो वायरलेस एडप्टर यो डाउनलोड गरेर समर्थित हुन्छ भन्ने सुनिश्चित. निम्न लिंक जो निर्धारण तपाईं वायरलेस एडप्टर आफ्नो कम्प्युटर सिस्टम मा स्थापित छ मदत गर्नेछ.
स्वचालित रूपमा पत्ता लगाउन र Atheros QualComm चालक उपयोगिता अपडेट आफ्नो चालक र सफ्टवेयर अद्यावधिक
म्यानुअल आफ्नो Atheros QualComm वायरलेस एडप्टर र चालक संस्करण नम्बर पहिचान.
इन्टेल वायरलेस उपकरण चालक Windows अद्यावधिक 10 ओएस-स्टोरबाट
इन्टेल ब्लुटुथ बीटी वायरलेस उपकरण विंडोज चालकहरुको सफ्टवेयर डाउनलोड
विन्डोज चालक डाउनलोड जेनेरिक संस्करण लागि Atheros QualComm वाईफाई वायरलेस WLAN कार्ड मोड्युल
samsung प्रोसेसर प्रविधि चालक समर्थन ओएस-स्टोरमा सि.पी.यु Technology_Internet HTC सफ्टवेयर सार्वजनिक उद्देश्य इन्टेल प्रोसेसर उपकरण प्रबन्धक HD ग्राफिक्स nokia मोबाइल फोन शृंखला चालक समर्थन उपकरण मोडेल कानुनी व्याख्या 64-बिट विन्डोज
उपकरण प्रबन्धक सैमसंग ग्यालेक्सी nokia चालक समर्थन स्मार्टफोन इन्टेल प्रोसेसर Technology_Internet सफ्टवेयर प्रोसेसर शृंखला चालक समर्थन Qualcomm HTC सार्वजनिक उद्देश्य मोबाइल फोन उपकरण मोडेल कानुनी व्याख्या सोनी एरिक्सन सि.पी.यु samsung प्रविधि HD ग्राफिक्स इन्टेल सर्भर ओएस-स्टोरमा 64-बिट विन्डोज